के तपाईले PAN लिनु भएको छैन ? अब यसरी लिनुस PAN न घरमै बसि बसि ! – Public Health Concern(PHC)
in जानी राखे राम्रो, स्वास्थ्यमा चर्चा, स्वास्थ्यमा नेपाल सरकारका सूचना तथा जानकारीहरु
सरकारले अवकाे अार्थिक बर्ष देखी सरकारी या निजि जुनसुकै कम्पनिमा काम गर्ने कर्मचारीकाे प्यान दर्ता अावश्यक हुनुपर्ने नियम बनाएकाेछ ।
प्यान वास्तवमा जसले पनि लिन मिल्छ। यसका लागी कुनै क्वालीफिकेसन चाईदैन, बस तपाईले राज्यलाई कर तिरेकाे छ भन्न दिईएकाे अंक हाे ।
यसका लागी कुनै झनझट नै छैन ।यो घरमै बसेर अनलाइन मार्फत मज्जाले पाउन सक्नु हुनेछ ! हेरौं अनलाइन मार्फत पान न लिने तरिका step by step :
=>सर्ब प्रथम www.ird.gov.np मा गएर Tax Payer Portal मा जानुस्
=> त्यसमा Registration (PAN,VAT,EXCISE) मा गएर Application for Registration मा जानुस्
=> त्यसमा रहेकाे Username, Password, Number, Email ID राखेर, PAN मा टिक लगाएर IRO/LTO भित्र IRO Name मा अाफुलाई जुन ठाउं सजिलाे लाग्छ त्यही ठाउं छान्नुस र समिट गर्नुस् । अाफ्नै जिल्ला बाट लिएकाे राम्राे हाे तर अरु ठाउंबाट पनि मिल्छ।
=> यसपछि तपाईलाई submission number दिईनेछ। त्यसलाई कपि गरेर वा टिपाेट गरेर राख्नुस्। अब Registration login मा गएर साेही समिसन नं अनि username ..password राखी login गर्नुस र त्यहां भने बमाेजीम सबैकुरा राखेर समिट गर्नुस् ।
(त्यस भित्र नेपाली टाईप गर्न type nepali site वा Nepali Unicode Converter प्रयाेग गर्नुस् । साथै फाेटाेकाे साईज मिलाउन MS Paint/फाेटाेसव प्रयाेग गर्नुस् )
=> सबैकुरा मिले पछि समिट गर्नुस् र तपाईकाे सबै विवरण एउटा फर्म बनेर अाउनेछ। त्यसलाई print थिचेर pdf मा save गर्नुस्।
=> साे फर्म प्रिन्ट गरेर तपाईले छानेकाे कार्यलय जानुस् । कतिलाई अान्तरिक राजस्व कार्यालय कहां छ भन्ने नै थाहा नहाेला. Google Maps मा खाेज्नुस् है।
=> र त्याे फर्म लगी (अरु केही कुरा लानु पर्दैन, तही पनि नागरीकता र एउटा फाेटाे व्याकपकाेलागी लग्नुहाेला) कर्मचारीले भने बमाेजी गर्नुस्.. धेरै लाईन नभए अाधा घण्टामा सकिन्छ । यसकालागी कुनै पैसा लाग्दैन है ।
अनलाइन पान लिनका आबेदनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस !
अनलाइन पान रजिस्ट्रेशन गर्दा Moxilla Firefox ब्राउजर प्रयोग गर्नु होला !
Tags: How to registered pan via onlineJanaswaasthya SarokarPAN Noprocess of online pan registrationPublic Health Concern
मुख्यमन्त्री लाई ध्यानाकर्षण गराउदै : NePHA गण्डकी प्रदेश !जथाभावी पदस्थापना नगर्न सुझाव !
स्वास्थ्यका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुले भर्ने का.स.मु फाराम !